လက်ဝတ်ရတနာအံဆွဲ Safe Box Touch Touch Screen Buttons GB-370- Foshan Weierxin စက်ရုံ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လူနေအိမ် Safe > လက်ဝတ်ရတနာ Safe
Laptop Size Touch screen Lead Lead Lock လက်ဗွေ Lock Money Safe Box လက်ဝတ်ရတနာလုံခြုံမှုများ EH-2042-J
အိမ်ထောင်စုအံဆွဲ SafeSS ဝှက်ထားသော Fingerprint Password EH-2045-jh
လက်ဗွေလက်ဝတ်ရတနာနှင့်အတူလက်ဝတ်ရတနာအိတ် - 370 Cream Color-Weierxin လုံခြုံ
* အရွယ်အစား: H150 * w370 * d345mm
* Lock: Fingerprint + ဒီဂျစ်တယ်စကားဝှက်
* ဆလိုက် - ထွက်အံဆွဲ
* tempered touchscreen ဖန်ခွက်
* စကားဝှက်အရှည်: 4-6 ဂဏန်း
* အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20 + + 70 ℃
* 4x AA ဘက်ထရီ
item no ။ ပြင်ပအရွယ်အစား (MM) အတွင်းပိုင်းအရွယ်အစား (MM) n.w. (ကီလိုဂရမ်)
ဆုတောင်းပါ အလိုတော် ှုွမည်သောဆေး ဆုတောင်းပါ အလိုတော် ှုွမည်သောဆေး
1. biometric လက်ဗွေလက်ချောင်းသော့ခတ်လက်ဝတ်ရတနာ safe များ။
3. Touch Screen Digital Code ကိုနှိပ်ပါ။
4. Open to method သုံးခု - Password, Fingerprint နှင့်အရေးပေါ်သော့ချက်။
* အပြင်ဘက်ရှုထောင့်များ: H200 * W420 * D350mm ။* အတွင်းစိတ်အတိုင်းအတာ: H190 * W400 * D300mm ။* အထူ: တံခါး - 4mm, ခန္ဓာကိုယ် - 2mm ။* n.w ။ (ကီလိုဂရမ်): 12KG ။* Lock: အီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်လက်ဗွေရာ။* စွမ်းရည် - 14 "-17" လက်တော့ပ်များ။* အရောင်: အနက်ရောင်။* touch screen + LED display ကိုနှိပ်ပါ။* mounting တွင်း: နောက်ကျော၌2။* လျှပ်စစ်အမှုန့်ကုတ်အင်္ကျီဆေးသုတ်ခြင်း။* အီလက်ထရောနစ် override မှအရေးပေါ်အခြေအနေ& စက်မှုသော့။* သက်ဆိုင်သောမြင်ကွင်း - ဟိုတယ်ခန်း, ရုံး, ရုံးခန်း / အိပ်ခန်း / လေ့လာရေးခန်း / living ည့်ခန်း။
* အရွယ်အစား: H200 * w450 * d405mm* Lock: Electronic Digital Lock + လက်ဗွေ* စွမ်းရည် - 14 "-17" လက်တော့ပ်များ* အရောင်: အနက်ရောင်* mounting တွင်း: ကျော၌4တွင်း* သက်ဆိုင်သောမြင်ကွင်း - ဟိုတယ်ခန်း, ရုံး, ရုံးခန်း / အိပ်ခန်း / လေ့လာမှုခန်း / living ည့်ခန်း
* အရွယ်အစား: H150 * w370 * d345mm* Lock: Fingerprint + ဒီဂျစ်တယ်စကားဝှက်* ဆလိုက် - ထွက်အံဆွဲ* tempered touchscreen ဖန်ခွက်* စကားဝှက်အရှည်: 4-6 ဂဏန်း* အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20 + + 70 ℃* 4x AA ဘက်ထရီ